sida lacag looga helo ikhtiyaaraadka ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah, ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh, calaamadaha ganacsiga tooska ah, calaamadaha binary sare | vfxAlert official blog
Dhaqdhaqaaqa suuqa ayaa ah istiraatiijiyad ganacsi
Waxaa jira weedh caan ah oo ah “nibirigu wuxuu noqdaa mid si dhakhso leh u dheregsan markay ka dabbaalato looxaanta». Ganacsi ahaan, qaabkani sidoo kale waa la adeegsan karaa, iyo kahor sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah waa muhiim in la ogaado dhinaca aad ku sugan tahay - whale or plankton. Noqoshada «Forex whale» qof walba lama siinayo, laakiin waa suurtagal in si isku mid ah loogu dabaasho haddii aad isticmaasho ganacsi mug leh.
Xidhiidhka ka dhexeeya dhaqdhaqaaqa sicirka iyo isbeddelka isku dheelitirka awoodda u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyeyaasha, oo si muuqata looga dhex arki karo mugga macaamil furan, waa mid ka mid ah mabaadi'da aasaasiga ah ee Aragtida Dow. Waxba ma ahan sida ay taageerayaasha falanqaynta farsamada iyo laambadda ee istaraatiijiyada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ay isugu dayaan inay nagu qanciyaan ka soo horjeedka, iyagoo leh "qiimaha ayaa ku jira wax walba", dhab ahaantii, ka ganacsiga hanti kasta oo ganacsi waxay ku tiirsan tahay mugga.
Si kale haddii loo dhigo: qaddarka lacagta ee amarada furan ama la sugayo ee heerarka qiimaha gaarka ah. Haddii ciyaartoy waaweyni rabaan inay «u dhaqaaqaan suuqa» jihada saxda ah, marka hore waxay kordhiyaan bixinta lacagta boosaska dib loo dhigay.
Waa maxay mugga suuqa?
Tani waa tirada guud ee iibinta iyo iibsiga qandaraasyada la furay waqti cayiman oo ah maalin ganacsi ama kalfadhi loogu talagalay hanti maaliyadeed (lacag, kayd, mustaqbal, ikhtiyaarro, noocyo kala duwan, iyo kuwa kale). Waxaa jira laba nooc oo qiimeyn xisaabeed:
Sax - tirada kaliya ee macaamil ganacsi, isbeddelka isbeddelkooda;
Isweydaarsiga ama mugga "dhabta ah" - marka lagu daro wadarta guud, qiimaha lacageed ee macaamilada iyadoo la furayo heerarka qiimaha waa la arki karaa.
Ganacsi ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa ah mid la saadaalin karo - waxaad arki kartaa xiisaha dhabta ah ee kaqeybgalayaasha aagagga qiimaha iyo heerarka, laakiin xogta calaamadu waxay sidoo kale keeni kartaa faa'iido deggan.
Markaad falanqeyneyso mugga, ganacsatadu waa inaysan ku dhejin muhiimad badan xogta saxda ah ee dijitaalka ah; waxaa ka sii muhiimsan in lala socdo dhaqdhaqaaqa isbeddelada ku yimaada xiisaha furan iyo sida ay ula xiriirto tilmaamayaasha kale. Fiiri:
Cabirka hadda : yar, dhexdhexaad, weyn. Waxaan eegeynaa qiimayaashii hore muddo 10-15 ama ka badan;
Xogta macaamil ganacsi : yaa furay booska (iibsadaha ama iibiyaha) iyo cidda uu yahay: ganacsade suuq sameeye, xayndaab, khayaali ama ciyaartoy yar?
Natiija ahaan, istiraatiijiyadda ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah waa inay helaan xaaladaha "aan caadiga ahayn" ee suuqa, kuwaas oo lagu muujiyey iyadoo si deg deg ah u kordheysa ama hoos u dhigeysa mugga:
Gelida iyo wax soo saarka lacagta «weyn»;
Isbeddel ku yimaada isku dheelitirka awoodda iibsadayaasha / iibiyaasha;
Xaqiijinta jabitaanka heerar muhiim ah iyo kuwa kale.
Ganacsiga on Muga tick
Heer ahaan, xogta waxaa lagu soo bandhigaa qaab taariikhi ah, tiirarkeeda oo muujinaya inta heshiisyo (shil) lagu furay hanti ganacsi halkii cutub ee waqtiga ah. Mugaani wuxuu diiwaangelinayaa oo kaliya waxqabadka ciyaartoyda, kaliya wuxuu u shaqeeyaa dallaal gaar ah sababtoo ah qaabdhismeedka baahsan ee Forex iyo suuqa cryptocurrency. Intaas waxaa sii dheer, qulqulka xigashooyinku waxay noqon karaan daqiiqad, taas oo aan siinaynin fursad falanqeyn tayo leh oo lagu xoqo.
Sidaan horeyba u soo sheegnay, waxaan ku lafagureynaa mugga cabirka baarka hadda jira ee la xiriira kii hore: inbadan, ka yar, xaddiga ka weecashada celceliska qiyamka ee waqtiga iyo waqtiga ka sareeya. Ha iloobin in shilinta oo dhami ay isku miisaan yihiin, sabab kastoo ay noqotaba: - inay ku ganacsadaan ciyaartoy waaweyn oo leh hal milyan oo fara badan, koontaduna tahay bilow, calaamado ganacsi oo toos ah iwm. Dabcan, waxay ku leeyihiin saamayn gebi ahaanba ka duwan xaaladda guud.
Marka la eego xaddidaadda shilinta, su'aasha ayaa soo baxaysa - ganacsiga noocan oo kale ah miyuu faa'iido u yeelan doonaa xagga mugga? Haa, waa:
Marka mugga (baararka histogaraamku) koraan, markaa waxaa jira ixtimaal sare oo ah sii socoshada isbeddelka hadda socda ama jabitaanka heerka qiimaha ugu dhow ee dhow. Qalabka saxarku ma bixiyo saadaal sax ah, xaqiijin dheeri ah oo ka timaada calaamadaha binary sare ayaa loo baahan yahay, gaar ahaan inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa dhinac (flat);
Haddii suuqa kala-bedbeddelka hoose (muggu ku dhow yahay isla heerkaas) waxaa jira kala duwanaansho ballaaran oo kaladuwan ee histogaraam kor / hoos, tani waa calaamad muujinaysa isu-soo-ururinta xiisaha furan labadaba dhab ahaan qaabka boosaska furan " suuqa "oo dib loo dhigay Waxaan sugeynaa isbedel cusub.
Mar labaad, u fiirso dareenka ganacsatada binary in mugga shilintu aanu bixinaynin macluumaad ku saabsan dheelitirka iibsadayaasha / iibiyeyaasha, sidaa awgeedna loo jiheysto dhaqdhaqaaqa mustaqbalka. Waa suurtagal in la qiimeeyo oo keliya dhaqdhaqaaqa guud ee suuqa oo saldhig u ah falanqeyn dheeri ah.
Strategy la isticmaalayo tilmaamayaasha farsamo
Hantida ganacsiga, waqtiga ganacsigu wuxuu noqon karaa mid kasta, waqti shaqeed laga bilaabo M15 iyo wixii ka sareeya. Laba qalab oo kooxda oscillator ah ayaa loo isticmaalaa:
Farsamadan ganacsigu waxay u qaadanaysaa in shilinta iyo mugga dhabta ahi ay isku mid yihiin. Falanqaynta qaababka shumaca ayaa xaqiijin doonta isbedelka isbeddelada dhaqdhaqaaqa.
Nidaamyada doorasho Binary on Muga tick:
1. Muggu wuu korayaa, isbeddelku wuu hooseeyaa, waxaana jira shumacyo qallafsan - koritaanka qiimaha mustaqbalka.
2. Muggu wuu korayaa, isbeddelku wuu hooseeyaa, shumacyo xamaala ayaa la helayaa - hoos u dhaca qiimaha mustaqbalka.
3. Qiimaha ayaa sii kordhaya; mugga ayaa hoos u dhacaya kahor intaanay jirin xaalad p.1: isbeddelka muddada-dheer waa suurtagal.
4. Qiimaha ayaa sii kordhaya; mugga ayaa sii kordhaya ka hor intaanay jirin xaalad p.1: isbeddelka muddada-gaaban waa suurtagal.
5. Qiimuhu wuu dhacayaa, muggu wuxuu dhacayaa kahor intaanay jirin xaalad p.2: isbeddelka muddada-dheer waa suurtagal.
6. Qiimuhu wuu dhacayaa; mugga ayaa sii kordhaya ka hor intaanay jirin xaalad p.2: isbeddelka muddada-gaaban waa suurtagal.
MFI - tusmada fududeynta suuqa
MFI (Tusmada Fududeynta Suuqa) waa tilmaame ku habboon oo lagu qiimeeyo xaaladda isbeddelka suuqa ee hadda jira. Qiyaasta waxaa lagu fuliyaa iyadoo lagu saleynayo isbarbardhiga qiimaha iyo mugga isbeddelka muddo cayiman.
Qataarrada dhaadheer ee histogaraamku waxay muujinayaan iska caabinta hoose ee ciyaartoydii isbeddellada hadda socda; xaqiiji 'ujeedka' qiimaha si aad u sii wadato dhaqaaqista. Haddii muggu bilaabmo inuu dhaco, tani waxay marka ugu horreysa noqon doontaa calaamadaha calaamadaha binary ee bilowga dib-u-noqoshada iyo isbeddelka isku-dheellitirka Iibsiga / Iibsiga, waxaan sidoo kale daawaneynaa soo ifbaxa kala-duwanaanta leh Qiyaasta sida ugu xooggan.
Si kale haddii loo dhigo, kororka MFI oo hoos u dhac ku yimid dhaqdhaqaaqa waxay ka dhigan tahay in dhaqdhaqaaqa ay taageerayaan inta badan mala-awaalayaashu. Marka muggu kordho dhicitaanka MFI, waxay muujineysaa gelitaanka "lacagta caqliga ah" iyo bilowga dib u noqoshada ama jabitaanka kala-geddisan ee dhinacyada .
Sidoo kale fiiri midabka tiirarka histogaraam:
Cagaar (xoog leh) . Isbeddel xoog leh, firfircoonaan iyo mug labadaba isla mar ayey korayaan. Badanaa looma isticmaalo barta laga soo galo - waxay kaliya xaqiijineysaa jiritaanka dhaqdhaqaaq xoog leh iyo in la xakameeyo boosaska furan.
Brown (dhacaya) Qaadashada macaashka ayaa bilaabatay, laakiin illaa hadda ganacsigu wuu socdaa iyada oo aan la furin jagooyinka iska soo horjeeda. Hoos u dhac ku yimaad xoogga isbeddelka waxa xaqiijiyey tilmaame sax ah. Sida baarkii hore ee aan loo isticmaalin gelitaanka, waxaa badanaa lagu arkaa halka ugu sarreysa mowjadda 1aad ee Elliott.
Buluug (been abuur ah) Ciyaartoy waaweyn ayaa joojiya kordhinta mugga si ay u ilaaliyaan isbeddellada - qiimayaasha beenta ah ee soo kordhay ayaa u muuqda, iyagoo ka soo tuuraya suuqa yar «dad badan» suuqa. Waxaan ka joognaa suuqa oo aan daawaneynaa.
Casaan (sagging) . Muggu wuu kordhayaa, laakiin dhab ahaantii isbeddelku wuu dhammaaday oo xoojinta ayaa bilaabmaysa, ka dib markaa dib-u-noqoshada ama sii wadida dhaqdhaqaaqii hore ayaa bilaaban kara.
Haddii qalabka calaamadaha laba-geesoodka ah loo isticmaalo iyadoo lala kaashanayo falanqaynta mowjadda, raadi xaaladaha halka MFI ay ka galeyso aagagga ba'an ee qaabka "Doji" ama "Pin Bar" oo ay ku kala duwan yihiin oscillators-ka. Xaaladdan oo kale, itimaalka dib u noqoshada dhow waa ku dhowaad 100%.
Iibso calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ah : Kobaca MFI wuxuu ka badan yahay 20%, baarka hadda jira waa buluug. Qiyaasta on Volume-ka ayaa sii kordheysa, oo ku qulqulaya jaantuska.
SILMADA iibka : isla koritaanka iyo midabka shumaca ee MFI-ga, inta hartay ee shumacyadu waa bearish.
Labada xaaladoodba, calaamaddu waa lagu kalsoonaan karaa haddii hooska kore ee shumaca ka weynaado wadarta hoose iyo jirka. Qiyaasta taariikhda uu dhacayo ugu dambayn max / min .
Qiyaasta ganacsiga iyadoo la adeegsanayo istiraatiijiyadda Falanqaynta Faafidda ee Volume
Istaraatiijiyaddu waxay ku saleysan tahay cilmu-nafsiga ka-qaybgalayaasha suuqa; tilmaamayaasha farsamada looma isticmaalo nooca aasaasiga ah. Looma yeeri karo istiraatiijiyad adag oo loogu talagalay ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah, maaddaama aysan jirin sharciyo cad oo lagu furayo ama lagu xirayo jagooyinka, sida lagu bixiyay falanqaynta farsamada. Waxaa jira sharciyo guud oo keliya oo ku saabsan sida loo helo xilliyada gelitaanka ee kuwa sameeya suuqa, in aan laga dhigin qoraallo khaldan oo ku saabsan saxitaanka beenta iyo dib u celinta.
Falanqaynta VSA waxay isticmaashaa xogta faafitaanka (farqiga u dhexeeya Qiimaha Sare iyo Kuwa Hoose), mugga (tilmaamayaasha farsamada) iyo sooyaalka (faafitaanka / mugga firfircoonida). Iyadoo aan loo eegin waqtiga, waxaan falanqeyneynaa waxqabadka xilliyadii 15-20 ee la soo dhaafay. Sida ku jirta aragtida Chaos, waxaa jira seddex marxaladood oo suuqa ah: isku soo aruurinta, dhaqdhaqaaqa (isbeddellada) iyo qaybinta.
Kahor furitaanka ganacsiga VSA, sedex shuruud waa in la buuxiyo:
1. Go'aaminta dheelitirka saadka / baahida jirta.
Ujeedada ugu weyn ee istiraatiijiyad kasta oo adeegsanaysa mugga suuqa waa in la fahmo sida ay suuqleydu u dhaqmaan. Haddii dalabku kordho, kan ugu horreeya ee ka baaraandega amarrada si loogu iibsado qiimo jaban, taas oo keeneysa kororka xigashooyinka. Marka dalabku dhaco, xaaladda ka soo horjeedda ayaa la ogaadaa - ganacsigu wuxuu u socdaa qiimaha ugu hooseeya suuqa ayaa hoos u dhaca. Isla mar ahaantaana, tilmaamayaasha shilintu waxay ku sii jiraan isla heer ama xitaa koraan: waxaan eegnaa qaabdhismeedka gudaha ee baarka iyo muuqaalka calaamadaha ikhtiyaariga ikhtiyaariga ah ee dhabta ah.
2. Waa maxay "saamaynta-sababta" ee isbeddelka qiimaha.
Habka VSA wuxuu u maleynayaa in qiime kasta oo soo kordha uu ku saleysan yahay koror xoog leh oo mug ah. Haddii tani ay tahay saameyn muddo-gaaban ah, xawaareyntu ma sii dheeraan doonto sida dib-u-celinta iyo sixitaanka. Sidoo kale, ha iloobin in ganacsiga mug ahaan u baahan yahay kormeer joogto ah oo ku saabsan asalka, maaddaama aad geli kartid «daahitaanka» dhaqdhaqaaqa sare, oo si dhakhso leh u dhammaanaya iyo badanaa Jooji Khasaaraha.
3. «Dadaal-Natiijo» Saamiga.
Horumarinta mabda 'hore ee VSA - saad ballaaran / dalab (dadaal) ee sameeyayaasha suuqa waxay keeneysaa isbeddel xooggan (natiijo). Haddii aysan jirin falcelin u dhiganta, istiraatiijiyadda la adeegsaday ma siineyso calaamado binary otomaatig ah, ka dibna waxaa jira isdaba marin mala awaal ah - waxaa fiican inaad ka maqnaato suuqa.
Aan soo koobno…
Isbeddelada dhexdhexaadka ah iyo muddada-dheer, ganacsiga mugga wuxuu u shaqeeyaa si la isku halleyn karo, laakiin tirada calaamadaha beenta ah ayaa kordha inta lagu jiro maalinta. Hadda waxaa lagama maarmaan ah in la falanqeeyo sida calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ahi u shaqeeyaan oo keliya marka laga eego aragtida «smart smart», laakiin sidoo kale laga soo bilaabo booska «smart liquidity». Boqolleyda sii kordheysa ee socodka ganacsiga waxaa ku mashquulsan meherado yaryar oo la furay iyadoo la adeegsanayo algorithms-ka ganacsiga sare leh (HFT). Tan waxaa loo sameeyaa si loo qariyo himilooyinka dhabta ah ee ciyaartoy waaweyn - way fududahay in "la qariyo" tiro badan oo iyaga ka mid ah oo ku dhow heerar qiimo leh, taas oo adkaynaysa falanqaynta xaaladda guud.
Laakiin, inkasta oo ay jiraan cillado oo dhan, waxaa suurtagal ah in la fahmo caqliga ciyaartooyda waaweyn iyadoo la falanqeynayo mugga, taas oo ka dhigaysa mid suurtagal ka dhigaysa in si joogto ah looga faa'iidaysto.